Jair Bolsonaro oo sheegay in go aan aan laga gaarin u guuritaa... | Universal Somali TV
Jair Bolsonaro oo sheegay in go aan aan laga gaarin u guuritaanka safaarada Brazil ee magaalada Jerusalam
Madaxweynaha la doortay ee dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa meesha ka saaray in safaarada ay ku leeyihiin caasimada Tel Aviv loo raro magaalada Jerusalem ee dhulka barakeysan ee Qudus.
Mr Bolsonaro ayaa hadalkaan ka sheegay kadib booqasho uu maanta ku tagay magaalada Rio De Jinerio tan iyo markii la doortay bishii hore waxaana uu tilmaamay in aan wali go;aan laga gaarin arintaan.
Arintaan ayaa ku soo aadeysaa kadib markii xukuumada Masar ay hakisay booqasho uu magaalada qaahira ku tagi lahaa wasiirka arimaha dibeda Brazil Aloysio Nunes,taasi oo la xiriirtay guuritaanka safaarada.
Xukuumada Masar ayaa ku boorisay dhigeeda Brazil in arintaan ay keeni karto in saaxiibo badan oo muslimiin ay ku weyso hadii aysan ka laaban go'aanka ay Brazil safaaradeeda ugu rareyso magaalada Jeruselam.
Madaxweyne Bolsonaro ayaa intii uu ku gudo jiray ololaha doorashada balan qaaday in safaarada Brazil laga rarayo meagalada Tel Aviv,balse waxaa uu maanta sheegay in arintaasi aysan aheyn go,aan si mideysan loo gaaray.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkaan bartamihiisa waxaa uu safaarada Mareykanka u raray magaalada Jerusalem iyadoo arintaan ay ka soo horjeesteen hogaamiye yaasha caalamka.
Magaalada Jeruslelam ayaa ah caasimada Falastiin waxaana dowlada Israel lagu eedeyay in ay dooneyso in si xoog ah ay ku qabsato.
Kan-xigaDenmark oo xabsiga dhigtay sadex ruux...
Kan-horeXisbiga Dimuquraadiga oo badi ku guul...
47,169,425 unique visits